Global Voices teny Malagasy » Britanika Mpanao Gazety Meritreritra Fa Tokony Hiala Tsiny Amin’i Amerika Latina Izao Tontolo Izao Noho Ilay Antsoiuy hoe “Ady Amin’ny Zava-mahadomelina” · Global Voices teny Malagasy » Print
Britanika Mpanao Gazety Meritreritra Fa Tokony Hiala Tsiny Amin'i Amerika Latina Izao Tontolo Izao Noho Ilay Antsoiuy hoe “Ady Amin'ny Zava-mahadomelina”
Voadika ny 02 Febroary 2017 3:47 GMT 1	 · Mpanoratra Autor Invitado Nandika (en) i Meghan McDonald, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika
Johann Hari. Sary nalaina tao amin'ny Wikipedia Commons. Sehatra ho an'ny daholobe.
Ity manaraka ity dia famerenana mamoaka ny tafa nataon'i Estefanía Sepúlveda Portilla  (ESP) ho an'ny Pousta , fikambanan'ireo media Shiliana, ary navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan-dry zareo tamin'ny fampiasàna ny lisansa Creative Commons 4.0. Hozaraina roa ilay tafa havoaka ato anatin'ity famerenana ity.
Indray andro dia nanapaka hevitra ilay Britanika mpanao gazety, Johann Hari (JH), ny hitondra fomba fijery mitsikera ireo lohahevitra momba ny fiankinandoha amin'ny zava-mahadomelina, antony an'ny tenany manokana fa tsy noho ny asa fanaovana gazety. Tao anatin'ny fanadihadiany, hitany fa ilay antsoina hoe “Ady amin'ny zava-mahadomelina” — politika erantany ataon'i Etazonia, ary taty aoriana noterena fotsiny haondrana ho any Meksika sy ny ambiny ao Amerika Latina hiatrehana ny olan'ny zava-mahadomelina, ny fitaovam-piadiana ary ny fonja — dia efa an-jato taonany no nisy..
Tsy manohana ilay tetikady akory ireo fandalinana sy fanaporofoana ara-tsiansa, nefa io tsy nampihisatra ireo politikany manerantany. Mandritra izany, lasa mihasarotra hatrany ilay olana ary miparitaka any amin'ireo firenena tsirairay any amin'ny faritra, ary tsy mbola hita manangasanga izay ho fiafaràny. Fifanoherana tanteraka, tsy olana izay fomba hijerenao azy. Miaraka amin'ny fitiavany ny asa fanaovana gazety sy ny olana mivaivay niantraika taminy manokana, nanokana taona telo i Johann nitetezany firenena 15 mba hitady valinteny.
Ny vokatra farany dia ny bokiny “Chasing the Scream “, (Manenjika Hiakiaka) izay mandalina sy manontany momba ireo fomba fijery izay nahazatra hiarovana ilay fifandirana tsy mitsahatra. Ho an'i Hari, ao anatin'ny fanambaràny voalohany nandritra ilay tafa :
Iray amin'ny antony nanadihadiako ity lohahevitra ity nandritry ny fotoana ela dia satria ny tsiaroko voalohany fony aho mbola zaza dia izaho nanandrana namoha ny dadatoako, izay noheveriko fa mbola natory, nefa tsy efako. Taty aoriana, hitako fa nisy fiankinandoha tamin'ny zava-mahadomelina tao anatin'ny fianakaviako.
Avy eo izy nanazava ny fototra niaingàn'ny asany : “Somary be fireharehàna ihany aho fony nanomboka azy ity, nihevitra aho fa nahalàla zavatra maro momba azy io, saingy tsapako fa na ny tena olana fototra amin'ilay lohahevitra aza tsy haiko akory,” hoy izy mahatsiahy. “Nisy ireny,” hoy izy, sady manisa ny rantsan-tànany eo amin'ny Skype, “Nahoana isika no nanomboka ady iray 100 taona lasa izay mba hiadiana amin'ny fiankinandoha sy ireo mpanjifa zava-mahadomelina? Nahoana no notohizantsika raha hita fa zavadoza? Inona no vahaolana misy hatao fanolo ho an'io tetikady io? Inona no mahatonga ny olona ho lasa mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina?”
Ho an'ny tenany ihany no nanaovan'i Johann ireo fanontaniana ireo, mialohan'ny nahafahanay nanontany zavatra hafa. Mialohan'ny nahavitanay nandika azy ireny tao an'eritreritra mihitsy aza, tohizany ny resany:
JH Naniry hipetraka miaraka amin'ireo olona tena milomano ao anatin'izy io aho, ireo izay nahita ny fiainany nidonan'io. Tany aminà firenena 15 aho ary tamin'ny farany dia nihaona taminà olona marobe, nifangaroharo, hafahafa sy isan-karazany: ahitàna ireo nanova fananahana izay nivarotra rongony tao Brooklyn, ka hatramin'ny olona iray mpikarama mamono olona ho an'ny iray amin'ireo fikambanna faran'izay mahery setra indrindra ao Juárez, Meksika. Tany Portiogaly aho, ilay hany firenena eto ambonin'ny tany nanao ny fandraisana zava-mahadomelina ho tsy heloka bevava, ary nahita vokatra mampitolagaga. Ny fehiny goavana nataoko, avy eo, dia hoe diso daholo ny zavatra rehetra heverintsika fa haintsika momba ny resaka fiankinandoha: tsy izay eritreretintsika no zava-mahadomelina, ary tahàka izany koa ny ady amin'ny zava-mahadomelina.
ESP: Ndeha hatomboka hatrany amin'ny fiandohany. Tamin'ny fomba ahoana ary nahoana no nanomboka ny “Ady amin'ny Zava-mahadomelina” ?
JH Tena mahaliana mahafinaritra, satria zavatra mitovy amin'izay mety ho lazain'ny olona hafa aminao eny an'arabe ihany no noeritreretiko: satria tsy tian'izy ireo ho lasa mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina ny olona, na tsy tiany handray zava-mahadomelina ny ankizy. Saingy tsia, tsy misy ifandraisany amin'izany mihitsy na kely aza. Mahavariana ny mitety ny tantaran'i Harry Anslinger, ilay namorona ny ‘Ady amin'ny Zava-mahadomelina’. Nomena azy ny toeran'ny Talen'ny Birao Fandraràna ao Etazonia, raha teo am-pifaranany indrindra ny fandraràna. Nitazona izany masoivoho lehibe izany sy nitàna toerana ambony izy, saingy tsy misy na inona na inona hataony. Araka izany dia namorona io ady io izy mba hahafahana manohy ny fisian'ilay birao. Ary zavatra telo faran'izay hàlany indrindra eto ambonin'ny tany no nataony ho fototry ny nanaovany azy : ireo Afrikàna Amerikàna, ireo Latinos ary ireo mpiankindoha amin'ny zava-mahadomelina. Nanangana fitantanana iray manontolo izy, nifototra taminà zava-dratsy ara-tsosialy, mba hamoretana ireo vondrona ireo.
Ahoana no nahatafiditra an'i Amerika Latina tao anatin'ny lalao ?
JH Io no tena fon'ilay “Ady amin'ny Zava-mahadomelina”. Rehefa mandràra ny zava-mahadomelina ry zareo, tsy manjavona izy ireny fa mifindra tànana fotsiny avy eny amin'ny mpitsabo sy ny mpivarotra fanafody, ary lasa any amin'ireo mpivarotra an-tsokosoko mitam-piadiana, ary avy eo i Etazonia manatsiny an'i Meksika noho io antony io, izay somary maneso kely ihany raha hitanareo amin'izao fotoana izao, 100 taona aty aoriana, nafantok'i Trump tamin'io hevitra io ny fampielezany hevitra. Nanao zavatra feno fahasahiana sy tamim-pisainana ny governemanta Meksikana tamin'izany fotoana izany. Nolazain'izy ireo tamin'i Etazonia hoe ‘Hitanay ny zavatra ataonareo, ary tsy mandaitra’. Araka izany, napetrak'izy ireo i Leopoldo Salazar Viniegra, ho tomponandraikitra hisahana ny politika momba ny zava-mahadomelina. Nanana toby fanarenana izy ary tsy vaovao amin'ilay olana. Avy eo izy niteny hoe: ‘Tsy tena manimba ny Cannabis, tsy tokony horarantsika izy io. Momba ny olan'ireo zava-mahadomelina hafa, mila karakaraina amim-pitiavana sy halemem-panahy ary ara-pitsaboana ireo olona miankindoha, saingy tsy tokony horaràna ny zava-mahadomelina satria raha izany no atao, dia ireo mpivarotra an-tsokosoko, ny gangsters ary ireo cartels (samy fikambanan-jiloahy mpikirakira zava-mahadomelina daholo ireo) no hifehy azy io. Raha misy olona teto ambonin'ny tany nomen'ny tantara rariny, dia i Leopoldo Salazar, sa ahoana hoy ianao?
ESP: Izany mihitsy.
JH Izao no navalin'i Etazonia, ‘Ento miala any ilehio’. Nolazain'i Meksika fa ninoan-dry zareo izy, ary avy eo i Etazonia, tsy miala amin'ny fomba fanaony, niditra amin'ny fandrahonana sy ny famoretana, nampiato ny fanondranana ara-dalàna ny fanafody ‘opiate’ vita avy any Etazonia mankany Meksika. Dia nanomboka maty ny olona. Tsy maintsy nilefitra i Meksika. Tahaka izany no niparitahan'ny ady amin'ny zava-mahadomelina hanenika an'i Amerika Latina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/02/95152/